Ndakabatwa nemukadzi wangu ndichisvira Secretary muOffice! – Makuhwa.co.zw
Mungaone zvenyu kufara kwandiri kuita mukati zvinhu zviri kundifambira.Pane nyaya yakaitika kwandiri zvekuti handizivi kuti ndogarisana sei nemudzimai wangu amai Chantel.
Inini ndinerombo rakanaka rekuti ndinebasa rakanaka repamusoro rinokuridzira kuti ndive nesecretary uyezve ndine office yangu. Tavanemakore maviri taroorana naMai Chantel, vanovimba neni,muunhu uyezve muushando hwangu nevamwe.Secretary wangu ane makore 24, haana kuroorwa asi unetuvakomana twake twakati tuchamuroora hameno.
Musi wemuvhuro,Mai Chantel vakandifonera vachiti varimuqueue yekumapassport kuri kuma4 pm.Vakati ivo,pamwe vachanonoka kusvika kumba pamusana penguva ye pick-hour. Zvikanetsa pamwe vanogona kuuya kubasa kwangu kuti vaperekedzwe kumba.Ini ndakauzda Mildred kuti kana nguva yakwana yekuenda kumba azoenda zvake, ini ndaizombotimirirei Mai Chantel, pamwe vaizouya kubasa.Iye akapindura kuti kana azopedza kutypa maminutes emusangano wakanga wapfuura ozoenda zvake.Mai Chantel havangauye.Kudoedza kuvafonera paCell pavo VoiceMail! Ini ndakavamirira ndichiverenga magwaro emusangano waive mangwana acho,Mildred akapinda ndokubvunza achiti “Nhai Mr Sango mudzimai wenyu do you think achauya iyeyu?” “A-a, handifungi nekuti maoffice ekumapassport anopfigwa madoor na3:45,uyezve sezvo dzavakunanaira kuma 6, anoziva kuti ndinenge ndatobuda kuenda kuSports Club yangu for darts.” ndakapindura. “Bva-a, zvakanaka,ini ndanga ndapedza kutypa maminutes maminutes asi panenyaya yandanga ndichida kuti mundibetsere kana kundiraira.
Regai ndimboenda kuladies ndinodzoka manje manje”Akadaro achibuda.Ini ndakasara ndigere padesk pangu ndichinetsekana kuti ingava nyaya yeyi yamirirwa kusvika usiku hwakadai,ave kuda kuresigna here,akanganisa chimwe chinhu here,hameno. Nenguva isipi Mildred akadzoka ndokupfiga gonhi reOffice yangu sezvaanongochiita mazuva ose.Akagara pachigaro chiri pamberi pedesk rangu, chiya chakatarisana neni.Akanditarisa neziso riya rekuti”haundizivi here?”Anga akapfeka skirt iri pakati peumini asi isiri mini.Muupenyu hwangu hwandakashanda naye,chemusi weMuvhuro chakanga chakaoma.
Mildred aive musikana akanaka pachiso zvese nemuviri asi mazuvaose ndaisambozviisa mumusoro nekuti ndakaroora “ndaitya”mwari.Chinzwai zvakazoitika. “Mukomana wangu haadi zvekundisvira ”Mildred akadaro achitambanudza maoko ake zviya zvekupererwa. “Iwe Mildred handiti ndiye auya achikutora masikati for lunch ndakatarisa.She said ehe. saka wogoti haadi kukuona sei?”Ndakadero ndichikanuka. “Haadi zvekundisvira.Tavane 2 yrs tichidanana asi haasati ambonditi o-oh.Mboro yake ndinotoinzwa kana takwira bhazi tese tikaita luck rekuita mastanding passengers tese.Dai aiziva kuti mboro ndinoidawo zvekuti, nechemumoyo ndinenge ndichiti ndosuwa mboro-oo.Ini ndakangoti ah-hh.Mildred akaramba akagara akavhura makumbo mukaskirt kake zvokuti I could see beche rake.Handina kuziva kuti paakakumbira kuenda kuladies aive anobvisa bhurugwa.
Pabeche pake from afar ndaitoona kuti pakagerwa zuda uyezve tuchoya twake twakatwatanga kumera.Matinji ake aive masvipa setwugaro twemwana mucheche. “Do you like what you see?” Ndakaramba ndinyerere uyezve ndigere pandaive ndiri.Mildred uya kwave kusimuka ouya ochonjomara semukadzi arikugeza beche rake mubacket pamberi pangu akomana.Akanyemwerera apo akaona chitutu chadhindikira pamutodo wangu. “Amon makuseni ega ega pandinoona mboro yako yakadhindikira pabhurugwa rako ndinobva ndanzwa kuda kusvirwa newe zvakaipa asi ndinonyara kukuudza.Asi nhasi—-” Mid akatanga kukwatanura Zip yebhurugwa rangu achiburitsa zimboro raive ravamuzvambarara wangu muunderwear mayo,watoti twi-sebenzi.Achiona izvi,Mildred akaridza kamhere kadiki-diki kekufarira zvaaona nezvichatevera. “Mai we nhasi ndinofa nekunakirwa.Zimboro rose iri mumhango mangu matonunira zvekuda kuiswa.” Ini kwavekunanavira nechigunwe changu pabeche pake kuti ndizvibatire sure.Wanike a-ah,panunira nekuzara muto wesviro seorange ratsemuka pakumenya. “Nhai Mid waidii kundiudza kare kuti zvekupakwa nemboro yangu ndozvazvaunoda?”Iye akapindura achiti”Ndainyara.Chinyararai ndizvimenyere nzvonyo yenyu iyi yakutonhuwa uronyo.akadaro achinzvonyora mboro yangu.Mildred akatotaura achidetemba achiti mboro dzakanzvonyorwa ndodzinonaka nekuti kakanda kacho kari soft uyezve kanopisirira.